Musika Wedu wepasi rose
Zvigadzirwa zvedu parizvino zviri kutengeswa muUnited States, Canada, Australia, Malaysia, Japan, United Kingdom, New Zealand nedzimwe nyika zhinji. Kuti tishandire zvirinani misika mikuru yedunhu, isu takaisa matura makuru matanhatu ekumhiri kwemakungwa, nzvimbo dzekutsvagisa nekusimudzira nzvimbo dzekugadzira ...
Nhanganyaya yetimu yedu yehunyanzvi
Tine nyanzvi R & D timu. Iyo R & D uye chigadziko chekugadzira chinofukidza nzvimbo inosvika 10,0000 mativi akaenzana tsoka. Isu tinopa akagadziridzwa mota mairatiyeta ane yakanyanya kutonhora mashandiro uye takagadzira zvinopfuura mazana mashanu zvigadzirwa. Kune parizvino anopfuura mazana manomwe akachinjwa mota radiator mamodheru uye nezvimwe ...
Shanghai West Bridge Inc. Co., Ltd. yaivepo mune yazvino vhezheni yeAutomechanika, yakakosha kurongeka kune indasitiri yemotokari, yakaitika munaNovember muShanghai. Kambani yedu iri kushanda kubvira 2011 kuti igutse zvido zvevatengi vane mhando par ...